Otu ụzọ mgbawa dara n’obodo Beirut – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Otu ụzọ mgbawa, nke abụọ buru ibu karịa nke mbụ, dakwasịrị n’obodo Beirut n’isi mgbede Tuzdee, gbuo opekata mpe mmadụ 154, merụrụ ihe karịrị 5,000 ahụ ma bute mbibi zuru ebe niile. A kpọgara ihe karịrị mmadụ 1,000 n’ụlọ ọgwụ, 120 ka nọkwa n’ọnọdụ dị oke egwu na Fraịde, ka minista ahụike Lebanon, Hamad Hassan kwuru.
Mgbawa nke abụọ zipụrụ mkpọmkpọ ọkụ na-acha ọbara ọbara n’elu ọdụ ụgbọ mmiri obodo ahụ wee mepụta ebili mmiri na-ama jijiji nke gbajiri enyo ruo ọtụtụ kilomita. N’agbanyeghị nnukwu ọrụ nyocha, a ka kwenyere na ọtụtụ ndị na-efu efu n’obodo, isi obodo Lebanon, nke dị n’ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Mediterranean.
Ka ndị ọchịchị na-achịkọta ihe merenụ, lee ihe anyị maara na ihe anyị na-amaghị.
Gịnị kpatara mgbawa ndị ahụ?
A ka amabeghị ihe kpatara ya, mana ọkụ gbara n’ụlọ nkwakọba ihe n’ọdụ ụgbọ mmiri n’ihe dị ka elekere isii nke abalị. E nwere ihe mgbawa abụọ, nke dị ntakịrị bụ́ nke obere sekọnd gachara site na mgbawa ka ukwuu nke bibiri ógbè obodo ahụ.
Tags: akiraanimeapocalypsearabbakugobakugoubeirutbeyrouthbnhaboku no hero academiaboomcalligraphycedarcitycutedekudikedubaiegyptemiratesexplosionfairouzfunnyhabibiike nileiraqizukujapanjordankacchankatsukikatsuki bakugoukonosubakuwaitlanguagelebanonlord explosion murdermangameguminmhamiddle eastmiddle easternmidoriyamoroccomúsicmy hero academianostalgiaọkụqatarquotesretrosaudi arabiasyriatypographyuaeuhie uhievintage
Next Maysa a paris a panagbettak ti nangdungpar iti siudad ti Beirut
Previous א פּאָר יקספּלאָוזשאַנז שלאָגן די שטאָט פון ביירוט